Welulekela - akusiwona nje iqoqo ezithile umzimba ukuthi kuzokuvumela kalula ukulwa Umphikisi bhala ngemuva indlebe yakhe kwesokunxele nge uzwane lonyawo lwakhe lokunene, kodwa futhi umsebenzi eside, njalo nangokusuka enhliziyweni awubongwa. Yiqiniso, sonke ebuntwaneni ukubukela amabhayisikobho lapho nobuqhawe Jean-Klod Van Damme, ethwele "mstyu" sakhe esibi nje kwamasonto ambalwa, ukwenza ukuzelula umzimba izinyawo ezilula, olunesisekelo yokuhlukanisa ephelele. Kodwa nakhu kanjani ngempela? Yilokhu sizoxoxa.
Izisekelo: elifudumele-up, Amazing
I kuyadabukisa kakhulu ukuthi Beginners eziningi yokwelula, ukwenza iphutha ezinkulu alikho yokuthi ngokukhetha okungalungile umzimba for esisuka imilenze. Twine kuyinto sebekwazi ukuqonda ngisho noma hhayi ngokushesha, kodwa noma ubani imilenze emibili, amandla kanye ingqondo isebenza endaweni efanele. Lonke iphuzu ukuthi esisuka umzimba imilenze noma kunjalo akufanele kwenziwe ngaphandle pre-elifudumele-up, okuzobe ahlanganisa hhayi kuphela eziyinkimbinkimbi wokulungiselela, kancane kancane esisuka imisipha, imisipha kanye nemisipha, kodwa futhi izivivinyo amandla ukuthi zenzelwe kulungele imisipha yakho ngaphambi ukusebenza ukugwema ukulimala okungadingekile.
Ngu iyazifudumeza izivivinyo gaphambi kufake tinhlobonhlobo Hlala-ups, egijima (unga on the spot), ukweqa, ukukhahlela izinyawo zabo (ububanzi ukushayela) nokunye. Kufanele kwenziwe ngokushesha ngangokunokwenzeka, inqubo kulokhu akusho inendima ekhethekile.
Ngokuphambene, iyazifudumeza, umzimba zokukwazi imilenze ngilulekela zihlanganisa: uvemvane (izinyawo ndawonye, njengoba eduze ukhalo, amadolo bathambekele phansi), isiqeshana (abahlezi ngamadolo akhe, amanga emhlane wakho, ngaphandle eqondisa imilenze), edonsa kusuka unyawo omunye komunye eguqa nokunye.
Futhi kukhona iqhinga elikuvumela ukuba ngezinye izikhathi weqa isinyathelo bafudumale. Ingqikithi yalo iwukuba ugeza ashisayo ngaphambi ngilulekela. Imisipha yakho nemisipha razogreyut indlela yemvelo kakhulu, futhi akudingi ukuba nhlobo ukuzinikela ukwenza lula inqubo eziyisisekelo.
indlela elula ukwenza ezidabula
Yebo, naphezu kwakho konke, le ndlela yokudla. Kodwa lokhu akulona iphilisi eliwumlingo ukuthi kweso ujike wena ku Bruce Lee, ngakho kulungele ukusebenza, umsebenzi kanye isikhathi esengeziwe emsebenzini egameni umgomo wabo!
Indlela elula ukuze uthole lolu hlobo Twine - yokwelula njalo futhi nombala. Beka nhlangothi zombili izihlalo ezimbili futhi kokuncika kubo, lunged kwesokudla umlenze izimisele ngesikhathi edolweni, ngangokunokwenzeka kusengaphambili. Umlenze kwesokunxele lokhu kufanele bahlale endaweni. Ngemva kokufinyelela kumkhawulo izandiso zayo, wenze enye ezintathu noma ezine Jerk ke yenza isivivinyo esifanayo ngilulekela imilenze ngu swapping kubo. Kuphela ngemuva kokuzwa beqiniseka amakhono akho (hhayi ngaphambili kweviki elilodwa) kumele kuqale yokwelula ngemilenze yakhe eyeluliwe.
Nale string konke kulula kakhulu. Sabalalisa imilenze ngaphandle kuze kube yilesi sikhathi, uze uzizwe ukungezwani futhi ubuhlungu endaweni okhalo. Lungisa lesi simo walibeka wezincwadi eziningana eziphathelene alolu, ahlale kuwo. Linda kancane, bese ususe ibhuku elilodwa, isikhathi ngasinye lapho ihlala phansi njalonjalo. Kungakuhle usuku une ukuhlala 3-4 amasentimitha.
Futhi okubaluleke kakhulu, wenza zonke lezi ngilulekela umzimba izinyawo, kungakhathaliseki ukuthi unethemba uzizwa, ungalokothi singayinaki elifudumele-up, kungenjalo lokho kuyoholela kona kuletha imiphumela emibi. Inhlanhla, futhi zemidlalo impumelelo!
Uba kanjani womzimba: amathiphu for girls abazali bazo
Nezokungcebeleka isikhungo esiqhingini Russian: izivakashi izincomo
Rupert Everett (Rupert Everett): Filmography futhi ukuphila siqu umlingisi (esesithombeni)